How'd it happen and more reports?: ျမန္မာ့ စြန့္ဦးတီထြင္စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း MYANAMR ENTEREUR SME INTUSTITUTE!
ျမန္မာ့ စြန့္ဦးတီထြင္စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း MYANAMR ENTEREUR SME INTUSTITUTE!
Lecture Training Vedio
Business English နဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
MANAGEMENT & LEADERSHIP နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
HUMAN RESOURCE နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Marketing နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
IMPORT/EXPORT နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
FINANCIAL MANAGEMENT နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
STOCK EXCHANGE နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
HOTEL & TOURISM နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ENTREPRENEUR & SME နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
OFFICE MANAGEMENT နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
SUCCESS & MOTIVATION နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစားတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Labels: ကုုန္သြယ္ေရးသတင္း, စီးပြားေရး, ပညာေရး